Miyuu Apache OpenOffice Future? | Laga soo bilaabo Linux
helena_ryuu | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Maalmo ka hor ayaa Apache Software Foundation (ASF) ay ku dhawaaqeen taas Apache openOffice waxay ahaan laheyd hada laga bilaabo Mashruuc heer-sare ah (TLP). Andrea Pescetti, Madaxweyne-ku-xigeenka Xafiiska Apache yiri:
«Ficilkani waa aqoonsi rasmi ah in mashruucu awood u leeyahay is-maamul ma aha oo kaliya arrimaha farsamada, laakiin sidoo kale arrimaha bulshada.«.
Habka "Apache way" iyo qaababkiisa, go'aan qaadashada dadweynaha iyo hufnaanta buuxda, ayaa u oggolaatay mashruuca inuu si guul leh u soo jiito una shaqaaleeyo mutadawiciin cusub oo uu doorto guddiga maareynta mashruuca kaas oo awoodi doona inuu damaanad qaado mustaqbal xasilloon. Apache OpenOffice aragti ahaan.
OpenOffice fue mashruuc muhiim ah oo il furan and .. laakiin kan ku jira «fue«. Markii loo abuuray inay noqdaan Xiddig Xiddigle Qaybta Xiddiga sannadihii 90-meeyadii, waxay muhiimad weyn u lahayd sidii xafiis xafiis oo furan. Ka dib markii Qeybta Star ay heshay Sun sanadkii 1999, iyo isbadalkeedii ku xigay ee OpenOffice, waxay u dejiyeen inay tahay qeybta ugu muhiimsan ee xafiiska furan.
Sun ayaa ka baxday mashruuca, si kastaba ha noqotee, ka dib markii Oracle ay heshay Sun sanadkii 2009, horumariyeyaasha ugu weyn ee OpenOffice, oo aan waligood ku faraxsanayn, waxay bilaabeen inay soo saaraan fargeeto la yiraahdo LibreoOfice. Way ku farxi lahaayeen inay la shaqeeyaan Oracle, laakiin Oracle ma rabin inay wax ka qabato, ugu dambayntiina 2011, way baxeen. OpenOffice.
Dhanka kale, LibreOffice si fiican ayuu wax u waday. Qeybinta ugu weyn Linux, sida Ubuntu, ayaa laga sameeyay LibreOffice xafiiskaaga ugu weyn. Hay'adaha kale, sida Intel iyo Aasaaska Software Free waxay siiyeen taageeradooda LibreOffice. Waxay muujisay waxoogaa horumar ah marka la barbardhigo dhiggeeda, waxayna leedahay wareegyo horumarineed oo xoog leh iyo horumarin degdeg ah.
IBM waxay hoos u dhigtay fargeeto ahaan OpenOffice, Lotus Symphony, inay ka shaqeeyaan OpenoOffice. Naqshadeeyaha softiweerka, Rob weir, wuxuu yiri:
«kheyraadka la geliyay hal-abuurka ayaa hadda lagu ridi doonaa OpenOffice »kooxda horumarinta OpenOffice ee Hamburg sidoo kale waa la shaqaalaysiiyey, khibrad badanna u leh saldhigga furaha. Waxay ka shaqeynayeen mashruuca Apache ilaa bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, waxayna la socdaan horumarka kooxda ka socota Symphony. Waxaan ku leenahay maalgashi ballaaran mashruucan, oo ay ku jiraan barnaamijyo, QA iyo naqshadeeyayaasha UI, waxay si furan uga shaqeynayaan liisaska boostada Apache«
Waa run in Apache OpenOffice ay sii socoto inay sii wanaajiso, laakiin inta badan horumarintu waxay umuuqdaan inay ka yimaadeen LibreOffice codebase, marka waa maxay ujeedka sii wadida OpenOfice?
Markaan fiirineyno qorshayaasha noocyada soo socda ee labada mashruuc waxaan arki karnaa isku ekaanshaha: iswaafajinta wanaagsan ee qaabka Xafiiska OpenXML 2007 - 2013, noocyada kiniiniyada iyo joogitaanka daruuraha.
Ka dib sanado badan oo iska caabin ah, Microsoft waxay ugu dambeyntii taageertaa Foomka Document Open (ODF) 1.2 iyadoo lagu taageerayo aqrinta, tafatirka iyo keydinta Xafiiska 2013. Tan macnaheedu waxaa weeye in ugu dambeyn uu jiri doono qaab ay Microsoft Office, OpenOffice iyo LibreOffice ay si buuxda u taageeraan, tani waxay sameyn kartaa wax badan Fikradda ah in la isticmaalo qolalka furan ee furan ayaa rafcaan u leh isticmaaleyaasha.
Sida elav faallo ka bixisay Apache OpenOffice 3.4 soo saar, ma mudan tahay in laga tago mashruuc sidoo kale loo horumariyo sida LibreOffice? Waa wax laga xumaado in la isweydiiyo haddii AOO uu hor istaagi karo LO, isagoo ah labada mashruuc ee Meel Furan ee Awooda badan tanina waxay soo jeedinaysaa in, halkii aad waqti iskaga lumin lahayd oo aad labalaabi lahayd, maxaa diidaya inaad xoog ku biirto oo aad ka shaqayso hal xafiis oo il furan ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Miyuu Apache OpenOffice Future?
Uma maleynayo in OpenOffice waligiis yeelan doono muhiimada ay u laheyd bulshada barnaamijka bilaashka ah. Waxa aan aad u jeclahay ayaa ah wararka ku saabsan taageerada Xafiiska 2013 ee qaabka ODF, taas oo ka caawin doonta dadka inay si fudud ugu haajiraan libreoffice. Aad u fiican boostadaada. Hambalyo.
Kaliya asalka asalka ah (illaa inta aan ogahay) ee maqaalkan (Ingiriis), oo uu qoray Steven Vaughan-Nichols, oo ku saabsan ZDNet ayaa la waayey: http://www.zdnet.com/does-openoffice-have-a-future-7000006480/ dhammaan kuwa xiiseynaya.
Tarjumaadda iyo la qabsiga waa mid qiimo leh, maxaa yeelay dhammaanteen kuma wada hadalno Ingiriisiga (weli), laakiin waa lama huraan in lagu dhawaaqo meesha laga soo xigtay ... Waxaan ula jeedaa, xatooyo xaddidan ayaa ah iyada oo aan loo eegin luqadda laga soo xigtay ... ama haddii ay tahay uun internetka maqaalka.
Hadana hadaan kuu sheego waan iska hilmaamay, hehehe bilawga qaladkiisa, xalay waan tarjumay hadaad weydiisana tifaftiraha, waxaan u xiisay waxyaabo yar yar, midkood ayaa xiriirinaayay asalka dhamaadka boostada: P , Ujeeddadaydu maahayn inaan naftayda ku abaalmariyo shaqada qof kale, way ka sii cad tahay inay tahay tarjumaad suugaaneed ee maqaalka asalka ah, waana ku mahadsan yahay inaad iga dhigtay ogeysiis, qaladkan (oo aan asalka asalka ah) dib u dhicin
Diyaar iyo anigu waxaan daryeelay ilaha, Helena, gacaliye, waa waxyaabo aadan ilaawi karin; Kama warqabi karo ilaha maqaal kasta maxaa yeelay si dhab ah uma garanayo halka ay ka yimaadeen ama haddii ay yihiin abuuristiisa.
hehe hadaan ogahay, waxay ahayd qaladkeyga, mana ku eedeynayo ¬ ¬, waan qirayaa inay khaladkeyga aheyd !! waa inaan u turjumay feyl qoraal ah, ka dibna aan u soo guuriyey meesha laga soo galo, iyo dadaal aan ku hubinayo higgaadinta, waxaan seegay isku xirka ilaha, halkii aad ayaad ugu mahadsan tahay sida aad u muujisay faallooyinka iyo waxyaabo kale. Waxaan kuu balan qaadayaa inaysan mar dambe dhici doonin TT ^ TT
ha walwalin, waan kaaga darnaa adiga xD
"[…] Waan tarjumay xalay." Waxaad u jeeddaa, "Waan tarjumay."
Adiga, sayidkaygiiyow, gabi ahaanba waad saxantahay, waa inaan u adeegsado sida ugu fudud ee la soo dhaafay kaamil ah, waxaan ula jeedaa, "waa la tarjumay", wixii aan idhi waa inay ahaadaan nooc ka mid ah isku xirnaan qaldan, la soco inaan ficil ahaan ugu xirayo faalladayda labaad. xDDDD
Ka dib markii aan isku dayay labada si aan u arko kala duwanaanshaha, labadaba Linux iyo Win7, waxaan ku qanacsanahay in OpenOffice laga shaqeynayo sidii loola dagaallami lahaa kan dambe. Aniga ahaan sifiican ugama shaqeynayo Linux, laakiin Win7 waxay u shaqeysaa sidii toogasho oo kale; lid ku ah wixii igu dhacay aniga oo ah LibreOffice, oo sifiican ugu shaqeeya Linux.
Waxaan u maleynayaa inay macno samaynayso in dadaalka loogu hibeeyo mashruuc sida OpenOffice oo kale ah. In kasta oo LibreOffice uu jiro, haddana waxaa wanaagsan in ay jiraan waxyaabo kale. Dadaalo laban laabmay waxay iila muuqan doontaa wax dhib ah aniga haddii ay jiraan mashaariic badan oo siman, laakiin in yar uun markaan u arko inay qalad tahay.
Waa kiis ka soo horjeedka qaybinta Linux. Jiritaanka jajabka waxaa kujira 100 kaliya darajada walina cidna kama cabaneyso inay badan yihiin. Waxaan u maleynayaa in halkaas ay fiicnaan laheyd in xoog la is biirsado, laakiin in la helo dhowr qol oo xafiisyo ah ayaa ila muuqda.
Dhankeyga waxaan soo dhaweynayaa Apache OpenOffice.
Uma maleynayo isku mid, laakiin way i dhibaysaa inaan doodo xD. Si fudud distros iyo qolalku waa laba shay oo kala duwan oo laga yaabo ama laga yaabo inayan fulinin tirada dadka ee X.
LOL !! Markaa anigu iskama kaa horimanayo. XD
Fikradaha oo dhan waa la ixtiraami karaa, dabcan. 🙂
Hagaag hada hadaan ra'yigayga dhiibto, ka hor intaanan ku lug yeelan waxyaabo kale.
Waa hagaag aan aragno, su'aasha intaas oo dhan waxay tahay in qolalka xafiisku had iyo jeer u baahan yihiin koox khubaro aad u tiro badan oo ka shaqeeya iyaga sababo la xiriira dabeecad ahaan sida qalab wax soo saar. Marka laga hadlayo AOO iyo LO waa in labaduba ay aad isugu egyihiin runtiina ay tahay inaan loo baahnayn macnona u samaynaynin inay jiraan laba, aad iyo aad u badan oo og in midba midka kale qaybo ka qaato si uu isu hagaajiyo. Sidoo kale waa inaad maanka ku haysaa in, cadaabta, LO ay mar hore ka faa'iideysaneyso AOO iyo sidoo kale, wax macno ah ma sameyneyso inaad ku shaqeyso qol kale feker ahaanteyda markii aad runtii ku biiri karto kooxaha shaqada oo aad sameyn karto wax aad u weyn.
Distros, dhanka kale, waa mashruuc uu maamuli karo hal qof, wax walboo waxay kuxiranyihiin heerkooda, iyadoo tan lagu xisaabtamayo, distro watch distros, kuwa runta weyn, dhamaantood waxay leeyihiin kooxo dhameystiran, in kastoo aan waxay leeyihiin SolusOS tusaale ahaan, oo ay gebi ahaanba qaadaan Ikey.
Muhiimadu waxay tahay, iyadoon loo eegin intee in le'eg oo qalad ah oo soo baxa, tirada dhabta ah ee muhiimka ahi waxay ku urursan tahay inyar (ubuntu, arch, debian, fedora, suse, chakra, iwm.) Kuwaas oo ah kuwa runtii sameeya horumar la taaban karo ee Linux iyo kuwa kale (iyadoon loojeedo in la yaso) waxay yihiin kuwo si fudud u jahawareersan oo ku saleysan kuwa kale ama si fudud u ah tijaabooyin ama mashaariic shaqsiyeed; wax shaqo ah kuma lahan horumarinta iyo horusocodka xafiis xafiis, oo aysan fulin karin hal ama labo qof, maahan inay wax yar yihiin oo aad u aasaasi ah marka hore.
Waa waxoogaa si xun loogu murmay, laakiin haye, maahan sidaan ula socdo dhammaan rabitaanka dunida xD
Dooddu way fiican tahay. Waa la fahmay oo macno samaynayaa. 🙂
Waad saxan tahay, laakiin waxaan u maleynayaa in qodobka muhiimka ahi uusan ahayn tirada dadka ka shaqeynaya mashruuca, in kasta oo aan diirada ku saaray faalladaydii hore. Muhiimadu waxay tahay inay jiraan waxyaabo kale oo dadku doortaan hadii barnaamijku uusan daboolayn baahidooda ama uusan ku raacin dhadhankooda ama qaabka ay u shaqeeyaan.
Waxaan tixraacayaa, anigoon usii dheerayn, faallooyinka halkan lagu dhajiyay Pablo ama Gadi, oo ka cabanaya xawaaraha LibreOffice iyo dhibaatooyinka ay ku siiso cinwaannada. Waxay hubaan inay qadarinayaan beddelaadda.
Maxaa dhici lahaa haddii kuwa mas'uulka ka ah ay go'aansadaan in mashruuca loo maro waddo aan ahayn tan ay adeegsadayaashu rabaan, sida ku dhacday marar badan kuwa kale? Xaqiiqdii dad badan ayaa qadarin doona inay awoodaan inay doortaan qol kale.
Waxaa laga yaabaa in halkii laga heli lahaa tusaalaha distros ay noqon laheyd mid ku habboon in la dhigo midka ka mid ah jawiga desktop-ka. Aniga shaqsi ahaan waligey maan jeclayn gnome ama KDE. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inay jiraan deegaanno ay ka mid yihiin XFCE ama LXDE iyo xitaa maamuleyaasha daaqadaha miisaanka culus. Haddii aysan taasi ahayn, waxaa laga yaabaa inaad wali isticmaaleyso Windows. 🙂
Waxaan ahaa isticmaale furanOffice ilaa 1.1 walina waxaan xasuustaa inay ahayd talaabadii ugu muhiimsanayd ee aan qaaday kadib Gimp si aan ugu wareego codsiyada bilaashka ah. Sababta loo doortay OO waxay ahayd iswaafajinta dukumiintiyada Ms Office. Waqti kadib waxaan u wareegay Libreoffice runtuna waxay tahay inaanan waligey wax dhibaato ah qabin. Dhammaantood si fiican ayey u shaqeeyeen.
salaan iyo mahadsanid boggan weyn!
Waxaan isku dayay libreoffice 3.6.2 walina way gaabis tahay in labilaabo sidookale wali waxoogaa cilado ah ayaa kajira maaraynta docx iyo doc files, so…. Waxaan dib ugu noqday xafiiskii furan 3.4.1 kaas oo, layaabteyda, dhaqso kubilaabaayo dhibna aan kuheyn bilaabida archiovs docx, dabcan wey bilaabeysaa laakin ima ogola in aan ku badbaadiyo kordhintaas, iyo dokumentiyada caadiga ah ama dhexdhexaadka ah riwaayad. Uma maleynayo in AOO mustaqbal badan leeyahay laakiin xilligan la joogo way ka wanaagsan tahay LIBREoffice, waxaan rabaa inaan isticmaalo LIBREOFFICE laakiin wali waxay haysaa waxyaabo yar yar oo aan aniga igu habboonayn
Marka haddaba waxaa jira hal shay oo OpenOffice uu kaga fiicanyahay LibreOffice. Marka durba macno ayey samaynaysaa in labaduba jiraan. 🙂
Ugu yaraan aniga ahaan, LibreOffice waxay igu qaadataa afar ilbiriqsi markii ugu horreysay ee aan gujiyo astaanta illaa aan ka qoro dukumiinti cusub, waqtiyada soo socda waxay igu qaadataa inta u dhexeysa hal ilaa laba ilbiriqsi. Qaababka loo yaqaan 'doc iyo ppt' (erayga iyo awoodda) waxaa loo furaa si isku mid ah MS Office inta badan, in kasta oo ay run tahay in docx iyo pptx ay wali u baahan yihiin inay shaqeeyaan ... waa sababta oo ah waa inay qasnaataa in si wanaagsan loola jaan qaado qaabab xiran.
Marka laga soo tago dhibaatooyinka iswaafajinta ee Open / LibreOffice (oo inta badan ah mas'uuliyadda MS Office ee ah in aan la jaanqaadin heerarka la dejiyay), waxaan u maleynayaa in waxa loo baahan yahay ay tahay in qolalkan xafiisku runtii si fiican loo safeeyay si ay ugu shaqeyn karaan sida Microsoft oo kale. Anigu uma ihi u dood si kasta oo alaabada Microsoft ah, laakiin xaaladdan, midkoodna xulashooyinka il furan ee jira wali tayo ahaan kama sarreeyaan.
Fulinta howlaha fudud, sida nuqul ka sameynta iyo dhajinta bogga internetka illaa dukumiinti qoraal ah, waxay noqdeen wax dhib badan markii la isku dayayo in lagu sameeyo Libre / OpenOffice, maktabadda shaqooyinka xaashiyaha, wali ma ahan sida loo dhameystiray, iwm. Haddii muuqaalka fargeeto cusub oo bilaash ah uu awood u leeyahay inuu xalliyo dhibaatooyinkaas, ka dib soo dhawow. Anigu waxaan ahay mid ka mid ah kuwa si adag u aaminsan in kala duwanaanta, oo ka fog shirqoolka ka dhanka ah ujeeddada guud, ay dhiirrigeliso horumarinteeda.
Odyssey waa maxay macnaha? Waxaan sidan uga soo shaqeeyay xafiiska bilaashka ah mana aanan la kulmin dhibaatooyin waaweyn ... dhibaatada kaliya ee i haysata waa iswaafajinta feylasha .docx, iwm.
Waxaan ku faraxsanahay in MS OFFICE ay horey u taageerto qaabka ODF, markaa madax xanuun yar
Waxaan sameyn doonaa faallo xoogaa ka baxsan mowduuca, laakiin haye. Waxaan isticmaali jiray LibreOffice ilaa nooca 3.6, waqtigaas oo ay ku soo dhacday qaar ka mid ah qorayaasha qoraaga in qaabka cinwaanka cinwaanka iyo cinwaanku ay isku mid yihiin oo ay iga xanaajiyeen dukumiintiyo badan (badan) oo aan keydiyay. Tan iyo markaas waxaan isticmaalayaa OpenOffice 3.4, oo ixtiraamaya wixii aan horey u keydiyey.
Tan waxaan ula jeedaa inaanan dan ka lahayn haddii LibreOffice ay leedahay taageero dheeraad ah ama in OpenOffice aysan mar dambe isku mid noqon doonin: Waxaan isticmaali doonaa waxa ugu habboon baahiyadayda, haddana waa OpenOffice. Waxaan rajaynayaa in maalin uun Calligra ay soo qabtaan labadan titan, halka aan ku sii wado OO.
Waxaa laga yaabaa inay tahay inaanan u adeegsan noocyada 'LibreOffice' markay soo baxayaan haddii waxa aan dooneyno ay yihiin xasillooni, waxa macquul ah ayaa noqon lahaa in laga boodo nooca deggan illaa nooca xasilloon, si aan nafteenna u la yaabno, tusaale ahaan, madaxyada ayaa baaba'aya.
Waad salaamantihiin asxaabta.
Hal shay. Fur su'aalaha. Waxaan leenahay iyo? si sax ah si looga fogaado jahwareerka
Ku ansaxinaya wadarta waxtarka